Tag: tarsan | Sagal Radio Services
TARSAN: "Gudoomoyihiii hore ee maamulkii Bobalka Banaadir oo ugu baaqay Booliisku in ay baraan Dilkii C/kaafi Hilowle"
Guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir, Max'uud Axmed Nuur (Tarsan) ayaa ka dalbaday booliiska gobolka Banaadir inay faahfaahin dhab ah ka keenaan sidii uu u dhacay dilkii xoghayihii hore ee gobolka Banaadir oo shalay lagu dilay meel ku dhow isgoyska KM-4 ee Muqdsiho.
Godoomiyaha Gobalka banaadir ayaa durba iska casilay magacaabista wasiir ku xegaankii xalay loo magacaabay
Warkaas ayuu ku sheegay shir jaraaid oo uu goor dhaw ku qabtay guriga uu ka dagan yahay magaalada muqisho isaga oo sheegay in aan lagala tashan xilkaasi qabashadiisa sida uu Tarsan sheegay.
Tarsan "Shirkadii u hogaansata amarka Shabaab ee Internet-ka dalka kama shaqeyn doonto"
Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Maxamuud Axmed Tarsan ayaa ugu hanjabay shirkadaha isgaarsiinta ee dalka cidii u hogaansanta amarkii Al-Shabaab ee ku saabsanaa mamnuucista Adeega Internet-ka aysan dalka oo dhan ka howl galeyn.
Gudoomiyaha Gobolka Banaadir oo ugu baaqay shacabka inay ilaaliyaan ammaanka
Gudoomiyaha Gobolka Banaadir Maxamuud Axmed Tarsan oo shalay ka hadlayay banaan bax lagu taageerayay mashaariicda hey'adaha Turkiga ka wadaan magaalada Muqdisho iyo waxqabadkooda ayaa ugu baaqay shacabka inay ilaaliyaan ammaanka shaqaalaha Turkiga.
Tarsan oo Sheegay in Sargaal dambe oo katirsan Xarakada Al-Shabaab uusan ka dhoofi doonin Garoonka Aadan Cadde
Gudoomiyaha Gobolka Banaadir Ahna Duqa Magaalada Muqdisho Maxamuud Axmed Nuur Tarsan ayaa sharaxaad dheeraad ah waxa uu kabixiyay kaararka aqoonsiga Muwaadinimada ee (ID-ga ) oo hada bixintiisa Magaalada Muqdisho ka bilaabatay